बिरामीले भरीए सरकारी अस्पताल निजीमा धाउदै स्थानीय
Mon, Jan 20, 2020 at 11:25am
बुधबार, २५ भाद्र २०७६,	–निरा गौतम.
रुपन्देही, २५ भदौ
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलबाट बिरामी फर्किन थालेका छन् । अस्पतालका सबै बेड बिरामीले भरिएपछि उपचारका लागि आएका बिरामी फर्किएर अन्यत्र जान बाध्य भएका हुन् । सरकारी अस्पतालमा डेङ्गु र भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढेपछि बिरामी महङ्गो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जान बाध्य छन् ।
दम बढेपछि मङ्गलबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि आउनुभएकी मुर्गीया निवासी भीमकला भण्डारी बेड नभएपछि फर्किनुभयो । “अस्पतालमा ठाउँ छैन भन्छन्, सबै ज्वरो र डेङ्गुका बिरामी छन् रे”, ह्विलचियरमा छोरासँग अस्पताल आउनुभएकी भण्डारीले भन्नुभयो । बेड अभाव भएपछि कतिपय बिरामीको भुइँमै राखेर उपचार भइएको छ । कपिलवस्तुको महाराजगञ्जबाट नवजात शिशुको उपचारका लागि आउनुभएकी एक दिनकी सुत्केरीले समेत भुइँमै बसेर शिशुको उपचार गराइरहनुभएको छ ।
“राति बच्चा जन्मिएको हो, मुखबाट आवाज ननिस्किएपछि जचाउन यहाँ ल्याएका हौँ, तर अझै चिकित्सक आएका छैनन्, हामीलाई यही बस्न भनिएको छ”, सुत्केरी आस्मा खातुनले भन्नुभयो । भाइरल ज्वरो र डेङ्गुको सङ्क्रमण बढेपछि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा रहेका सबै बेड बिरामीले भरिएका छन् । ठाउँ अभाव भएपछि आकस्मिक कक्षमा रहेका २४ वटै बेडमा दुईदेखि तीनसम्म बिरामी राखेर उपचार गर्ने काम भइरहेको छ ।
एउटै बेडमा तीनसम्म बस्नु पर्दा समस्या भएको बिरामीको गुनासो छ । “राम्रोसँग सुत्न मिल्दैन, शरीर दुखेर अडिन सकेको छैन, महिला भएको बेडमा कसरी सुत्नु” डेङ्गुको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका बुटवल हाटबजारका रोशन कुमारले भन्नुभयो । ठाउँको अभावले एउटै बेडमा महिला र पुरुष राख्दा झनै समस्या भएको छ । “ज्वरोले शरीर दुखेर बस्न मिलेको छैन, सुत्नलाई ठाउँ पुग्दैन”, अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुनुभएकी अर्घाखाँची नरपानीकी अम्बिका पाण्डेले दुखेसो गर्नुभयो ।
अस्पतालमा दैनिक एक हजार १०० बिरामीले सेवा लिँदै आएका छन् । आकस्मिक कक्षमा मात्रै दैनिक २०० को उपचार हुने गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा कृष्ण खनालले जानकारी दिनुभयो । “अस्पतालमा बिरामीको चाप हुँदा एउटै बेडमा हुँदा अस्पताललाई बिरामी थेग्न समस्या भएको छ ।”
भदौको शुरुआतदेखि जिल्लामा डेङ्गु र भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक मात्र नभई जिल्लाका सबै अस्पतालमा बिरामीको चाप छ । पछिल्लो एक हप्तामा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप झनै बढेको छ । बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसहित बुटवल हस्पिटल प्रालि, गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल, क्रिमसन अस्पताल मणिग्राम तथा भैरहवास्थित भीम अस्पताल र मेडिकल कलेजमा बिरामीको चाप बढेको छ ।
“अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी छ, दैनिक ३० देखि ४० भाइरल ज्वरोका बिरामी आउँछन्”, मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रबन्धक कमल शर्माले भन्नुभयो । बुटवलका अन्य निजी अस्पतालमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामीहरुको चाप छ ।
यस्तो छ तितो करेलाको मिठो फाइदा
३० बर्ष काटेपछि कुन-कुन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु आवश्यक ?
कलेजोमा बोसो जमेको छ ? यस्ता छन् घरेलु उपचार
यी हुन् चिसो मौसममा खानु पर्नै ५ फलफूल
क्यान्सर अस्पतालको विकासमा चीनको सहयोग हुन्छ : चिनियाँ राजदूत
कसलाई हुन्छ उच्च रक्तचापको जोखिम ? यी हुन् नियन्त्रणका उपाय
‘जैविक चिया प्रयोग गरेमा ८० प्रतिशत रोग निको हुने’
स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ? यी बानी अपनाउनुहोस्
के तपाइँलाई नाकको एलर्जी छ ? यसो गर्नुहोस्
कतै गलत तरिकाले नुहाइरहनु भएकाे त छैन ? नसा फुट्ला है !
जाडो मौसममा रोगबाट बच्न यी खानेकुरा खान अनिवार्य
बन्दीपुर अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा शुरु
कुन रंगको नङले कस्तो रोगको संकेत गर्छ ?
तपाईलाई थाहा छ ? धुम्रपान जत्तिकै हानिकारक छ चिनी
जाडो बढ्दै जाँदा के हुन्छ शरीरमा ? किन जान्छ ज्यान ? कसरी जोगिने ?
सप्ताहव्यापी रुपमा योग दिवस मनाइने
मुखमा घाउ आयो ? यसो गर्नुहोस्
कसरी रहने स्वस्थ ? सिकाउन घरघरमा आउँदैछ सरकार
सामुदायिक विद्यालयका छात्राले पाउन थाले निःशुल्क स्यानेटरी प्याड
यस्ता छन् जाडोमा मानिसलाई सताउने रोग, सबैभन्दा बढी खतरा मुटुलाई
यस्ता लक्षण देखिएका मानिसमा रक्त क्यान्सरको जोखिम उच्च
सानो सुकुमेलका ठूला फाइदा, यी रोगीका लागि अत्यन्तै उपयोगी
काठमाडौँमा ‘स्वाइन फ्लु’ र ‘हङकङ फ्लु’को संक्रमण देखियो, सचेत रहन चिकित्सककाे सुझाव
जाडोमा पिनासबाट कसरी जोगिने ?
ल्वाङ हो ठूलो औषधि, यस्ता समस्या भए पुग्छ फाइदा
स्वास्थ्य शिविरमा ३४ हजारभन्दा बढी लाभान्वित
कसलाई हुन्छ मस्तिष्कघातकाे जाेखिम ? यसबाट कसरी बच्ने ?
यस्तो छ घाम ताप्दै बदाम खानुको फाइदा
यी फलफूल तथा तरकारीमा तोकियो विषादीको अधिकतम सीमा